प्रतिबन्धपछिका दुई वर्ष : कहाँ थियाे विप्लवकाे सेल्टर ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ शुक्रबार नवलपरासीबाट झिसमिसेमै सार्वजनिक भए । सरकारले बिहीबार उनको पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै उनी सार्वजनिक भएका हुन् ।
नलवपरासीका सहिद परिवारलाई भेटेर सडक मार्ग हुँदैै काठमाडौं आएका उनी सामाखुसीको एउटा होटलमा पुगे । त्यहाँबाट बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वान टु वान संवाद गरेर राष्ट्रियसभा गृह पुगेर खुला भए ।
दुई दिनअघिसम्म प्रहरीले पक्राउका लागि खोजिरहेका विप्लव अन्ततः प्रहरीकै स्कर्टिङमा राजधानी छिरे । उनी चितवन प्रहरीको स्कर्टिङमा काठमाडौं आएका हुन् ।
त्योबाहेक विप्लवले आफ्नै सहयोगी पनि ल्याएका छन् । प्रहरीका अनुसार विप्लवका २२ जना दुईवटा गाडीमा उनीसँगै आएका छन् ।
यसअघि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई पनि शान्ति वार्ताको सफलतापछि कास्कीको सिकलेसबाट हेलिकोप्टरमा सोझै बालुवाटार अवतरण गरेका थिए ।
तर, विप्लव भने हेलिकोप्टरको साटो गाडीमै बालुवाटर छिरे । उनलाई पनि सरकारले हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको थियाे । विप्लवले नै हेलिकोप्टरमा चढेर आउन इन्कार गरेपछि प्रहरीको स्कर्टिङमा काठमाडौं आएका हुन् ।
सरकार र विप्लव समूहबीच बिहीबार मात्रै तीनबुँदे सहमति भएको थियो । उनको पार्टीका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सैन्य विभागका प्रमुख उदय चलाउने ‘दीपक’ थिए ।
सरकारका तर्फबाट भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्रीका विदेश विभाग सल्लाहकार राजन भट्टराई थिए ।
कहाँको सेल्टरमा थिए ‘विप्लव’ ?
सरकारले विप्लव समूहलाई २८ फागनु २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको हो । यसअघि उनी अर्ध-भूमिगत अवस्थामा थिए ।
११ फागुनमा ललितपुरको एनसेल कार्यालयको गेटअघि गराइएको बम विस्फोटपछि सरकारले विप्लव समूहमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध लगायो ।
त्यसयता विप्लव समूहका २ हजारभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परे । माथिल्लो तहका नेताहरू हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’ र धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ प्रहरीको नियन्त्रणमा परे ।
विप्लव भने देशका चारवटा सुरक्षा संगठनका आँखा छल्न सफल भए । विप्लव समूहका नेताहरूका अनुसार विप्लव प्रतिबन्धपछि अधिकांश समय कपिलवस्तु जिल्लाकै लुम्बिनी क्षेत्रलाई सेल्टर बनाएर बसेका थिए ।
त्याेबाहेक दाङ र नवलपरासी जिल्लालाई विप्लवले सेल्टरकाे रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।
कति भयो विप्लवको क्षति ?
प्रतिबन्धको दुई वर्षसम्म विप्लव समूहले कुनै पनि सुरक्षा निकायको ब्यारेकमा हमला गर्न सकेन । पूर्वी क्षेत्रका केही जिल्लामा भने विप्लव समूहले प्रहरी चौकी आसपास हवाई फायर गरेका थिए । यद्यपि दोहोरो भिडन्त भने भएन ।
प्रहरीसँगको मुठभेडमा भने विप्लवतर्फ केही क्षति भयो । भोजपुरमा २५ असारमा प्रहरीको गोली लागेर नीरकुमार राईको ज्यान गयो । उक्त मुठभेडमा प्रहरी जवान सञ्जीव राईले समेत ज्यान गुमाए ।
विप्लव समूहसँगको मुठभेडमा सुरक्षा निकायतर्फ ज्यान गुमाउने राई एक्ला हुन् । त्योबाहेक प्रहरीको गोली लागेर भोजपुरकै तीर्थ घिमिरे र सर्लाहीका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको पनि प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गयो ।
त्योबाहेक १२ जेठ २०७६ मा सिंहदरबारको पर्खालमा बम विस्फोट गर्ने गरी गरेको तयारीका क्रममा सुकेधारा, घट्टेकुलो र चन्द्रागिरीमा आफैँ विस्फोटनमा परेर आठ जनाले ज्यान गुमाए ।
कैलालीको विस्फोटनमा पनि एक जनाको ज्यान गयो । यसबाहेक २ हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रणमा परे ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, १६:१९:००